Glass Pump ပုလင်းထုတ်လုပ်သူများ၊ ပေးသွင်းသူများ - China Glass Pump ပုလင်းစက်ရုံ
12oz 350ml ရေမြှုပ်လက်ဆပ်ပြာသုတ်ဆေးသန့်ရှင်းရေးအဝတ်လျှော်များအတွက်ပုလင်းပုလင်းဖန်ခွက်
ကြည်လင်ပြတ်သားသောဖန်ပုလင်းများသည်အရည်သို့မဟုတ်အမြှုပ်ဆပ်ပြာများ၊ လိမ်းဆေးများနှင့်အခြားအရာများကိုလှပစွာသိုလှောင်ရန်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ ပါးလွှာသောအောက်ခြေနှင့်အတူလှပသောဒီဇိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားခြင်း၊ ပလတ်စတစ်မြှုပ်ပန့်များသည် BPA အခမဲ့ဖြစ်ပြီးအရောင်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက္ကားစျေးနှုန်းခံစားရန်အမြောက်အများဝယ်ယူစဉ်းစားပါ
အနက်ရောင်သံမဏိအမြှုပ်မြှုပ်စုပ်စက်နှင့်အတူ 8oz 250ml ပယင်းဖန်ပုလင်း
သံမဏိစုပ်စက်နှင့်အတူ AMBER ဖန်ခွက်ပုလင်းသည်အလွန်ကောင်းသောဆပ်ပြာပေးစက်ဖြစ်ပြီးခေါင်းလျှော်ရည်ပုလင်းကဲ့သို့ဖြစ်စေ၊ မှောင်မိုက်သောဖန်ပုလင်းများသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများ / ရနံ့ကုထုံးရောစပ်ခြင်းကိုသိုလှောင်ရန်အသုံးပြုသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်နေမှကာကွယ်ပေးသောကြောင့်ကြာရှည်လတ်ဆတ်စေသည်။
အမြှုပ်နှင့်အရည် dispenser နှစ်မျိုးလုံးရရှိနိုင်သည်!
355ml 12oz ကြည်လင်သောဖန်လက်ဆပ်ပြာပုလင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသော Matte အနက်ရောင်သံမဏိအမြှုပ်စုပ်စက်
အနက်ရောင်သံမဏိ dispenser စုပ်စက်နှင့်အတူ 12oz ပွင့်လင်းဖန်ပတ်ပတ်လည်ပုလင်း refilled နှင့်စွယ်စုံနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုဆပ်ပြာ၊ ဆပ်ပြာသို့မဟုတ်ချက်ပြုတ်ရာတွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဖန်ပုလင်းပေါ်ရှိသံမဏိထိပ်သည်အလွန်ကြာရှည်ခံသည်။ သံမဏိများကိုဆေးကြောသန့်စင်နိုင်ပြီးလိုအပ်သလိုသန့်ရှင်းနိုင်သည်။ ဤဖန်ပုလင်းများကိုဖန်သားဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးပန်းကန်ဆေးစက်တွင်ဆေးကြောနိုင်သည်။
သံမဏိအမြှုပ်မြှုပ်စုပ်စက်နှင့်ဆီလီကွန်လက်နှင့်အတူ 400ml ဖန်လက်ဆပ်ပြာပုလင်း
ဤဂန္ထဝင် Boston Round ကြည်လင်သောဖန်ပုလင်းများသည်အရည်သို့မဟုတ်ရေမြှုပ်သောဆပ်ပြာများ၊ ဆီများနှင့်အခြားအရာများကိုလှလှပပသိုလှောင်ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သည်။ Brushed silver color 304 stainless steel မြှုပ်ထားသောပန့်သည်သံချေးမသွားပါ။ ငါတို့သည်လည်းစုပ်စက်ပုလင်းများအတွက်အကာအကွယ်ပေး silicone အခြေစိုက်စခန်းပေး!
ပလတ်စတစ် dispenser စုပ်စက်နှင့်အတူဖန်ခွက်ပန်းကန်ဆပ်ပြာပုလင်းပတ်ပတ်လည် 8oz ပယင်း Boston
မည်သည့်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်များအတွက်ဂန္။ 8oz ပယင်းဖန်ပုလင်းဆပ်ပြာပေးစက်သည်သင်ရွေးချယ်သောထုတ်ကုန်အတွက်ကြော့ရှင်းသောဘူးတစ်ခုဖြစ်သည်။ အနက်ရောင်ပလပ်စတစ်ပန့်သည်ပုလင်းကိုဖွင့်ရန်ဖြုတ်နိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ထုပ်ပိုးမှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျော့နည်းစေပြီးလက်ဆေးခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ ပယင်းဖန်များ (သဲ၊ ဆိုဒါပြာနှင့်ထုံးကျောက်) ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းများမှာပါဝင်သောအရာများကိုခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များမှကာကွယ်ရန်ဒေသအလိုက်ရရှိသည်။
16oz ပလပ်စတစ်အရည် dispenser နှင့်အတူရှင်းရှင်းလင်းလင်း boston ပတ်ပတ်လည်စုပ်စက်ပုလင်း
dispenser ပါ ၀ င်သည့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောဖန်ပုလင်းသည်လက်သန့်ရှင်းရေးပြုလုပ်ရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စုပ်စက်၏ထိပ်ကိုမဖွင့်ဘဲသင်၏ပုလင်းကိုကြာရှည်စွာရွေးချယ်ထားသောထုတ်ကုန်ဖြင့်ဖြည့်တင်းနိုင်ပြီးထုပ်ပိုးမှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများကိုလျှော့ချနိုင်သည်။ ကြည်လင်ပြတ်သားသောဖန်သားသည်ရှင်းလင်းသောသို့မဟုတ်ရောင်စုံလက်ဆပ်ပြာဖြင့်လှပသည့်အပြင်မည်သည့်ရေချိုးခန်းကိုမဆိုသဘာဝနှင့်ရိုးရိုးလေးကြည့်နိုင်သည် မည်သည့်ရေချိုးခန်းသို့မဟုတ်မီးဖိုချောင်များအတွက်ဂန္။ မြေဖြူတွေသုံးပြီးတံဆိပ်တပ်တာနဲ့အတူအသုံးပြုမှုရည်ရွယ်ချက်ကိုရေးနိုင်မှာပါ။
8oz 16oz matte အနက်ရောင်အရည်ဆပ်ပြာပေးစက်ဖန်ပုလင်း
အနက်ရောင်ပလတ်စတစ်စုပ်စက်ပါသည့်ပန်းရောင်အနက်ရောင်ဖန်ခွက်ဆပ်ပြာပေးစက်ပုလင်းသည် 8oz, 16oz, 32oz နှင့်အခြားစွမ်းရည်များအတွက်ရရှိနိုင်သည်။ ဆပ်ပြာ၊ ခေါင်းလျှော်ရည်၊ အေးစက်၊ ခန္ဓာကိုယ်ဆေးကြောခြင်း၊ လက်သန့်ရှင်းဆေးနှင့်အခြားအရည်ထုတ်ကုန်များအတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
16oz 500ml အဖြူရောင်အရောင်ဖြူ boston ပတ်ပတ်လည်ဖန်အရည်အရည်ဆပ်ပြာပုလင်းနှင့်သံမဏိ dispenser နှင့်အတူ
စင်ကြယ်။ သန့်ရှင်းသောဗေဒပါသောဖန်ခွက်ဆပ်ပြာပေးသည့်ပုလင်း။ ဤအဖြူရောင်မွေ့လျော်သောဆပ်ပြာပေးစက် vittke သည်ရေချိုးခန်းကိုသပ်သပ်ရပ်ရပ်နှင့်ရိုးရှင်းစေရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးစတီးစုပ်စက်အဖုံးနှင့်အတူပြန်လည်ဖြည့်ရန်လှည့်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်ခွက်ဆပ်ပြာပေးသည့်ဘူးသည်ပလတ်စတစ်ပုလင်းများနှင့်လှပပြီးသဘာဝကျသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင့်အိမ်တစ်ခုလုံးတွင်အသေးငယ်ဆုံးအသွင်အပြင်ကိုဖန်တီးနိုင်သည်။
Pump Dispenser နှင့်အတူဖန်ပုလင်း, Clear Glass ပန့်ပုလင်း, ရေမှုန်ရေမွှား pump နှင့်အတူဖန်ဘူး, Pump နှင့်အတူ Glass Lotion ပုလင်း, မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအဆီများအတွက်ဖန်ခွက်ပုလင်း, ခေါင်းလျှော်ရည်အတွက်ဖန်ခွက်ပုလင်း,